Fitaovana elektronika mandeha amin'ny herinaratra fampidirana
Ny fanamafisana induction dia ampiasaina amin'ny fandefasana metaly, fitehirizana ny hafanana, fanivanana, fanamafisam-peo, famonoana, fanalefahana, fanamainana, fanadiovana vy, fanodinana hafanana, fanodinana fantsona ary fitomboan'ny kristaly. Ny famatsiana herinaratra fampidirana dia misy ny fizaran-tariby mpanitsy, ny inverter circuit, ny circuit load, ny control and circuit protection.
Ny teknolojian'ny famatsiana herinaratra antonony ho an'ny fanafanana fampidirana dia teknolojia manitsy ny hafanan'ny herinaratra mifandimby (50Hz) hitarika herinaratra avy eo miova fo ho an'ny salantsalany antonony (400Hz ~ 200kHz) amin'ny alàlan'ny fitaovana semiconductor herinaratra toy ny thyristor, MOSFET na IGBT. Ny teknolojia dia manasongadina fomba fanaraha-maso malefaka, hery fivoahana lehibe, ary fahombiazana avo kokoa noho ilay singa, ary mety hanova fahita matetika arakaraka ny takian'ny hafanana.
Ny fanitsiana ny fitaovana famatsiana herinaratra kely sy salantsalany dia manangana fanitsiana thyristor dingana telo. Ho an'ny fitaovana famatsiana herinaratra mahery vaika dia hampiharina ny fanitsiana thyristor 12-pulse hanatsarana ny haavon'ny herinaratra ary hampihenana ny fantsom-piraisan'ny tonta. Ny tariby herinaratra inverter dia misy ny volavolan-dalamby haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha avy hatrany dia mifanitsy amin'ny tarehin-tsoratra mifandraika amin'ny fahatsapana ny fivoahan'ny herinaratra avo.
Ny inverter sy ny circuit resonant dia azo zaraina amin'ny karazany roa arakaraka ny toetra amam-bika: 1) karazana resonant mifanila, 2) karazana resonant andian-dahatsoratra.
Karazan-tsarimihetsika mitovy: ny tiroristor (SCR) avo lenta misy herinaratra avo lenta dia ampiasaina hananganana tariby herinaratra inverter ankehitriny, ary ny fivoahan'ny herinaratra avo lenta dia azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny superposition of thyristors. Ny circuit resonant amin'ny ankapobeny dia mampiasa rafitra résonance mifanila tanteraka, misafidy ihany koa maodely roa na modely mpanova hampitombo ny herinaratra amin'ny inductor araky ny fepetra samihafa, ampiharina indrindra amin'ny fizotran'ny fitsaboana fanafanana.
Karazan-tsarimihetsika mitahiry resa-be: ny tiroristor (SCR) avo lenta misy herinaratra avo lenta ary diode haingana dia ampiasaina hananganana tariby herinaratra inverter ary misy herinaratra avo lenta dia azo avy amin'ny superposition of thyristors. Ny circuit resonance dia mampiasa firafitra resonans andiana, ary ny mpanova dia raisina mba hifanaraka amin'ny takian'ny enta-mavesatra. Ho fanampin'ny tombon-tsoa azo avy amin'ny hery avo lenta amin'ny sisiny Grid, haben'ny fanitsiana herinaratra, fisondrotana avo lenta ary taham-pahombiazan'ny fanombohana avo lenta, dia nanjary be mpampiasa kokoa izy io ankehitriny ary ampiharina amin'ny dingan-javatra.
Taorinan'ny fanatsarana ny fizotry ny famokarana, ny Runau novokarina haingana switch thyristor dia mampiasa taratra neutron sy ireo fizotrany hafa mba hanafohezana ny fotoana famonoana ary hihatsara ny fahaizan'ny herinaratra vokatr'izany.
Ny famatsiana herinaratra fanamafisam-peo fampidirana dia mandray ny thyristor satria ny fitaovana lehibe dia nanarona ny saha rehetra miaraka amin'ny hafanana miasa eo ambanin'ny 8kHz. Ny fahaizan'ny herinaratra dia mizara 50, 160, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000kW, 5000KW, 10000KW ny fahita matetika dia 200Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 4kHz, 8kHz. 10 taonina, 12 taonina, 20 taonina ho an'ny vy miempo sy famandrihana hafanana, ny tena herinaratra dia ny famatsiana herinaratra antonony. Ankehitriny ny fahaizan'ny herinaratra avo lenta dia tonga amin'ny 20000KW an'ny 40Ton. Ary ny thyristor no singa manan-danja fanovana sy inversion ampiharina.